Mitsara inonyatsozivikanwa - mavambo uye zvinoreva
Sayings | Mutauro werurimi
Nuts uye mabhoti
"Raseka semakungu", "mirai pamuchu", "ita zuva" - aya ndiwo mashoko atinoshandisa muupenyu hwezuva nezuva, tisingazivi chaizvo kuti vanobva kupi. Kunyangwe tichiziva zvatinoreva nezvayo uye munhu wese anonzwisisa zvinoreva shure kwayo, asi kana iwe ukatarisisa zvakanyanya zvisikwa zvemutambo, zvinowanzonyanya kushamisa kana kuti hazvisati zvichishamisa mazuva ano.
Idioms - zvavanoreva uye zvakabva
Mashoko mazhinji angagona kuita nemazuva ano, kuvapa mufananidzo wakajeka zvakare. Mashoko aya emazuva ano chete haawanisi kukunda uye isu nguva dzose tinodzokera kumashure ekutanga. Yenguva yekufungisisa zvakanyanya mavambo.
Mitsara inonyatsozivikanwa inongotsanangurwa
Idioms inogadziriswa neshoko zvivako izvo zvikamu zvisingakwanisi kuchinjwa nokuti zvisina kudaro iyo yose mifananidzo haisisiri yakarurama. Kubva "kureva nhema rwebhuruu rekumatenga" hazvikwanise kuva "Dzvuku kubva kudenga kuti rinyere", nokuti hapana anoziva izvi uye hazvizivi.
Idioms ndiwo mafananidzo anonyatsozivikanwa uye akabatanidzwa mumutauro wacho. Izvi zvinowanikwawo mune dzimwe mimwe mitauro. Apo ichi "kunaya" nesu, inaya kuEngland "Makati neMbwa" - kureva mukati nembwa. Munyika ino, hatinganzwisisi izvi, muEngland, kune rumwe rutivi, mumwe haanzwisisi twine.
Takaunganidza mazwi akawandisa uye takazviona pa "dzino". Pano iwe unogona kuzviona iwe pachako mitauro yakawanda zvikuru ine rudzi rwayo.
"Chikoro chekuchikoro chikoro ndecheAlma uye omega kutanga basa," anodaro mbuya vaFrederike, vachitarisa vachinyanya kuwanda pamakoro ezukuru wake. Frederike anoziva kuti haana kuparadzira mukurumbira wake mukati megore remushumo wegore uye anopindura nemakwai kuti achabva ari nani mumwedzi mitanhatu inotevera.
Izwi rokuti "alpha and omega" rinorevei?
Ipapo anokumbira mbuya kuti nei kuchikoro kuchikoro kwaizova alpha uye omega yekutanga basa. Ambuya vanopindura kuti: "Izvi zvinoreva kutanga nekuguma. Kana iwe ukanyatsoteerera kuchikoro kubva pakutanga, iwe uchazoguma uine dhigirii yakanaka uye unogona kudzidza chero chaunoda. "
Mushure memasikati, Frederike anoenda kumba kuti aratidze zvikoro kuvabereki vake. Anoramba achifunga nezvekuti nei muzukuru akagadza A yekutanga asi O yekuguma. Zvichida mukuru wako haagoni kuverenga nekunyora zvakanaka?
Amai vaFrederike vanofanira kuseka pamashoko aya emwanasikana wavo uye vanotsanangura kuti:
"ChiGiriki chinonzi A for Alpha seyokutanga uye O ye Omega seyekupedzisira tsamba. Mutsara unouya kubva pakushandurwa kweBhaibheri naMartin Luther. Mariri, Mwari anoti: "Ini ndini Arifa naOmega, kutanga nokuguma ..." Mashoko aya anobva Mubhuku raZvakazarurwa anoziva mai kana kushuma: "Izvi zvinoreva; uyo ane chivako uye kuguma kwechinhu chiri mberi, tenzi wezvose. Saka, simba rezivo rinoratidzwa. "
Frederike anofadzwa zvikuru uye anosarudza kuti mune ramangwana iye anoda kuramba akatarisa pazvinhu zvose uye achivandudza chikoro chake chikoro.
Anke isuruvara. Aida kuenda kumafirimu neshamwari yake yepamusoro nhasi, asi akadziviswa panguva yekupedzisira. Stefan, mukoma mukuru waAnke, anoedza kumunyaradza. "Zvino iwe unoenda kumafirimu mangwana, hazvisi izvo zvakaipa."
Izwi rokuti "pfungwa huru" rinorevei?
"Mangwana haisi zuva rema cinema uye firimu inodhura ma euro maviri akawanda. Pfungwa ndeyokuti, handina mari yakawanda yakasara. "
Haisi mamiriro ezvinhu akanaka, asi iwe unofanirwa kucheka pazwi iri muchitauriri.
Chii chinokosha? Mhedziso inokwidza uye ichidzika nomufaro here? Uye kana zvakadaro, chii ichocho chine chokuita nemashoko?
Mutsara unoratidza kukurumidza kana kukosha. Iyo inobva kuna Aristotle, uyo akaziva kuti paii yolk yeii yei chikapu chiduku chinokwira kumusoro uye pasi apo chigungu chinopanduka.
Ichi chiduku chiduku ndiko mwoyo uye nokudaro nhengo inonyanya kukosha yechiguchi ichikura. Uye saka shoko iri mumashoko rinotaura nezvezvinokosha pano.
Kutaura chitsitsinho mari
Idiom Unwrap bere
Kutaura kuti uri pa 180
Idioms - Ndichatsvaga stork
Idioms - Chivako chinodzivisa zvinoshamisa
Zvinyorwa zveGermany zvinonakidza muChirungu | kusetsa